हु किल्ड नान्सी ? « Salleri Khabar
हु किल्ड नान्सी ?
प्रकाशित मिति : 13 January, 2020
सिड भिसियसको मृत्यु भएको ४१ वर्ष पुग्दैछ । आखिर किन सिड भिसियसले आत्महत्या गरे ? नान्सीलाई कसले मार्यो ? हु किल्ड नान्सी ?
सिड भिसियस बेलायतको लेविशममा सन् १९५७ को मे १० मा जन्मेका थिए । उनको खास नाम सिमोन जोन रिची थियो । सन् १९७३ मा सिडले जोनी रोटनलाई भेटेका थिए ।
जोनी रोटन बेलायती पंकरक ब्यान्ड सेक्स पिस्तोल्सका भोकलिस्ट हुन् । सन् १९७७ मा बेसिस्ट ग्लेन म्याटलकले सेक्स पिस्तोल्स छाडेपछि उनको सट्टामा भिसियस आए । भन्ने गरिन्छ कि खासमा त्यति बेला भिसियसले बेस बजाउन जानेका थिएनन् । सिड भिसियस बेसिस्टमात्र भएको कारणले मिडियामा आउँदैन थिए । उनको लुक्स, लागु औषधीको लत अनि हिंसात्मक व्यवहारबाट पनि चर्चामा आउँथे ।
ब्यान्डको एक मात्र स्टुडियो एल्बम नेभर माइन्ड द बुल्लोक्स, ह्यर्स द सेक्स पिस्तोल्सको रेकर्डिंगकाे दाैरान सिड लागु औधषको कारणले अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । खास गरी उनले उक्त एल्बमको गीत ‘बोडिज’ मा मात्र बेस बजाएका छन् । पछि भने उनले प्रमुख गायकको रुपमा तीन वटा गीतमा स्वर दिएका छन् ।
सत्तरीको मध्यतिर पंक रक जनरा फस्टाउँदै थियो । यसैक्रममा सेक्स पिस्तोल्सको पनि ख्याति बढ्दै जान्छ ।
सिड र नान्सीको भेट सन् १९७८ मा लण्डनमा भएको थियो । नान्सी १७ वर्षको उमेरमा लण्डनमा आएकी थिइन् । सिडसँग भेट भएको बेला भने उनी १९ वर्षकी थिइन् । नान्सीले अमेरिका छाडेर लण्डनमा आएपछि चाँडै नै पंकहरुको समूहमा घुलमिल भइन् ।
सिड र नान्सीको मित्रता खुब जम्छ । यतिमात्र होइन, पछि सिडलाई हेरोइन र नान्सीबाहेक केही पनि मन पर्दैन । त्यति बेला सिड र नान्सी मिडियामा खुब छाएका थिए । नान्सी सार्वजनिक स्थानमा हिंसात्मक व्यवहार गरेको गरेको कुरा बारम्बार मिडियामा आएको थियो ।
सन् १९७८ मा ब्यान्ड फुट्छ । ब्यान्ड फुटेपछि सिड र नान्सी न्यू वर्क सिटीको चेल्सी होटेलमा बस्न थाल्छन् । बेलायत छाडी अमेरिका आए पनि उनीहरूकाे पुरानाे जीवनशैलीमा केही पनि परिवर्तन भएकाे थिएन । लागु औषध सेवन गर्नको लागि सहज होस् भनेर होटेल मिस्टर एन्ड मिसेज जोन सिमोन रिचीको नामबाट बुक गरेका थिए ।
सन् १९७८ को अक्टोबर १२ मा सिडले नान्सीको मृत शरीर हाृेटेलको बाथरुममा पाउँछ । नान्सीको पेटमा धारिलो हतियारले काटिएको थियो । जुन चक्कुले नान्सीको पेटमा काटिएको थियो उक्त चक्कु सिडले ल्याएका थिए ।
नान्सीको मृत्युपछि सिडलाई हत्याराको अभियोग लाग्छ । उक्त घटनापछि सिडले आफूलाई पनि मार्न खोजेका थिए । सिडले बयान दिने क्रममा हामीबीच झगडा भएको तर मैले केही पनि नगरेको बताए । त्यो दिन उनी निकै नशामा थिए, जसकारणले केही पनि सम्झन सकेनन् ।
नान्सी मरेको ४ महिनापछि सन् १९७९ को फेब्रुअरी २ मा सिड लागुऔषधको ओभरडोजले मृत्यु हुन्छ । उनी जमानतमा जेलबाहिर निस्केको बेलामा मृत्यु भएको थियो । सिडको आमाले सिडको ज्याकेटमा सानो कागज फेला पार्छिन् । सुसाइड नोटजस्तो देखिने कागजमा लेखिएको थियो,“हामीले मृत्युको सम्झौता गरेका थियाैँ । मलाइ आधा काम गर्नु नै छ । मलाइ नान्सीको छेउमा गाड्नु । मसँगै मेरो लेदरको ज्याकेट, जिन्स अनि मोटरसाइकल बुट पनि गाड्नु ।”
नान्सी किन मरिन् भनेर धेरै खालका सम्भावित कारणहरु आए । कसैले नान्सी सिडलाई धेरै चाहन्थिन् । सिडको ध्यान पाउनको लागि उनले आफ्नो पेटमा आफै छुरा हानेको भनी विश्वास गर्छन् तर सिड आफै नशामा मग्न थिए । उनले सहयोग गर्न सकेनन् । कसैले नान्सीको हत्या ड्रग्स डिलर्सले गरेको पनि हुन सक्ने आशंका गरे । नान्सीको चिहान नजिकै सिडको अन्त्येष्टि गरिन्छ ।
नान्सी जम्मा २० वर्षकी थिइन् भने सिड जम्मा २२ । उनको हत्या कसले गर्यो अझै पत्तो लागेको छैन । कसैले हत्याको अनुसन्धान नै नभएको बताउँछन् । नान्सीको मृत्युको कारण नखुलेपनि सिडको मृत्युको कारण भने नान्सी बनिन् ।
नान्सीले ब्यान्डका सदस्यहरुलाई लागुऔषधी सप्लाइ गर्थिन् । तर सिड भने ब्यान्डमा आउनुभन्दा पहिला नै लागु औषधको दुव्र्यसनीमा थिए । सिडलाई सेक्स र ड्रग्सको बारेमा राम्रोसँग परिचय नान्सीले नै गराएकी थिइन् । भाग्यको नियति भनौँ या उनीहरुको नशालु व्यवहार । १९ महिनामा उनीहरुको सम्बन्ध यति माथि गयो कि कसैले रोक्न सकेनन् । सिड मरेको दिनलाई रकस्टारहरुले पंक मरेको दिन भनी घोषणा गरेका थिए । सिडले छोटो समयमा पंक मुभमेन्टलाई निकै माथि पुर्याए । सेक्स पिस्तोल्सका लागि उनी एक बेसिस्ट मात्र नभई एक अद्भुत शक्ति थिए ।
केभिन हार्ट विरुद्ध दायर ६० मिलियन डलरको संघीय सेक्स टेप मुद्दा खारेज
यद्यपि ती महिला क्यालिफोर्नियाको स्थानीय अदालतमा पुनः अर्को मुद्दा दायर गर्न भने स्वतन्त्र छिन् ।
पूर्वपोर्नस्टार मिया खलिफाले गरिन् बिहे (भिडियो)
कुनै समय पोर्न साइटकी हिट पोर्नस्टार मिया खलिफा यो उद्योग छोडेपछि ‘सिरियस रिलेसनसिप’ मा थिइन्।
जोनी डिप इन्स्टाग्राममा
२૪ घण्टा नबित्दै जोनी डिपलाई २० लाख समर्थकले फलो गरिसकेका छन् ।
नेयमारको आमा छोरा भन्दा ६ बर्ष कान्छो व्यक्तिको प्रेममा
नेयमार २८ वर्षका भए । तर, नेयमारको आमा नादीन गोनकाल्भ्स भने छोरो भन्दा ६ वर्ष